Musharaxiin madaxweyne iyo xildhibanada oo caawa aan kala jiifaneyn & ololaha doorashada oo sii xoogeystay! | kowtharmedia.com
Home WARAR Musharaxiin madaxweyne iyo xildhibanada oo caawa aan kala jiifaneyn & ololaha doorashada oo sii xoogeystay!
Musharaxiin madaxweyne iyo xildhibanada oo caawa aan kala jiifaneyn & ololaha doorashada oo sii xoogeystay!
Xildhibaana Badan ayaa Caawa furay Boorsooyin waxa ayna lacago u qeebinaayaa Xildhibaanada balse “Sh. Shariif ayaa taagan walaal yaal Laaluush idiin mahaayo Lacagaha Cadowga ka soo qaata Codkiin isiiya”
Previous PostDAAWO: Dhacdo layaab leh: Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo lagu khalday General Gabre oo siwayn uga Xanaaqay! Next PostMid ka mid ah guddoomiye-yaashii ugu caansanaa degmooyinka Muqdisho oo geeriyooday!!